Maalin: Janaayo 31, 2018
Shirkadda Tareenka Tareenka ee Sleves ayaa ka jawaab celisay dekedda Koper
SŽ-Tovorni promet, qaybta xamuulka ee shirkadda tareenka ee dalka Slovenia, ayaa sheegay in la dareemay saamaynta qun-yarida dekeda Koper, in shixnadda dekeddu ay ahayd mid aan caadi ahayn oo ay macaamiisheeda bilaabeen inay joojiyaan tareenka, laakiin in khasaaraha dhaqaale ee hadda jira la ogaan karo. [More ...]
Qandaraaska Gebze Metro Line ayaa la qaban doonaa Febraayo at 1
Qandaraaska qadka metrooga ee u dhexeeya Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli iyo Gebze-Darıca waxaa lagu qaban doonaa 1 Febraayo Khamiista (Berri) 11.00. Shirkado fara badan ayaa la filayaa inay ka qeybqaataan qandaraaska, waxaa lagu qaban doonaa Dhismaha Adeegga Dawladaha Hoose ee Magaalada. [More ...]
Kulanka La-tashiga ee Xarunta Soogalootiga
Kulan wadatashi ah ayaa loo qabtay xarunta lojistikada ee la qorsheeyay in laga sameeyo Tekirdağ. Shirka Hay'ada hormarinta Thrace, Duqa magaalada Tekirdag Kadir Albayrak, Duqa Suleymanpasa Ekrem Eşkinat, Wakiilka Guud ee hormarinta Thrace. [More ...]
Degmada Eskişehir ee Magaalo-weynaha waa in ay damac galisaa khadka tareenka ee hadda jira Isbitaalka Magaalada. Dowladda Hoose, oo codsatay Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta ee qandaraaska, ayaa heshay jawaab wanaagsan. KA HOR INTA LAGU SAMEEYO MARKA AAD KA QAATO [More ...]
Shiinaha Shidaalka Shidaalka ah ee soo iibsiga Gaadiidka Tareenka
Shiinaha ayaa qorsheynaya inuu kordhiyo gaadiidka tareenka si loo hubiyo sahayda dhuxusha ee Shiinaha 2018 ujeeddadiisu tahay in la kordhiyo ugu yaraan 200 milyan oo tan oo ah awoodda gaadiidka xadiidka. Lian, Madaxweyne kuxigeenka guddiga horumarinta iyo dib-u-habeynta Qaranka [More ...]
Xarunta Tababaraha ee Samsun
Algerian Akguner, oo ku nool xaafada Guzeldere ee Samsun, ayaa waxa soo maray wakhtiyo adag sababta oo ah tareenka tareenka ee gurigiisa mara. Akgüner, oo ku hawlan suuq geynta, kama qaadi karo gaarigiisa waxuuna dhib ku qabtaa soo dejinta alaabada uu ka iibsado suuqa degmada Güzeldere ee degmada İlkadım ee Samsun. [More ...]
Waxaa muujiyey wasiirka horumarinta Lütfi Elvan, khadka tareenka xawaaraha sare ee Samsun-Mersin, oo ah tillaabada koowaad ee mashruuca Tareenka Aksaray-Ulukışla, ayaa lagu soo dhoweeyay adduunka ganacsiga Samsun. Wakiilo ka socda adduunka ganacsiga, dareenka dhaqaale ee mashruucu [More ...]
Shaqada Shaqaalaha TCDD inkasta oo ay jiraan xaalado adadag: Shaqaalaha Tareenka Gobolka ayaa u shaqeeya si adag inkasta oo ay jiraan xaalado carqalad leh. Dayactirka iyo Dayactirka Wadada Karaman TCDD 612 inkasta oo ay adagtahay xaaladaha cimilada iyo dhulka [More ...]
Guddi Isuduwidda Saadka 9. Kulanka Held
Gudiga Iskuxirka Saadka ee 9. Kulan ayaa lagu qabtay Ankara iyada oo loo maareynayo Suat Hayri Aka, Isuduwaha Wasaaradda Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta. kulan ayaa la qabtay. Waxyaabaha aan la soo koobi karin ee Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta ee Ankara [More ...]
1 Qofkii lagu dhaawacay Batmanda Tareenka Qashinka
Dadka 1 ayaa ku dhaawacmay shilkaas oo dhacay markii tareen uu ku dhacay gaari qashin ah oo heerkiisu marayay heer Batman. Sida ay sheegayaan wararka laga helay magaalada Batman Ikiri Kopru degmada tareenka, tareenka, isaga oo u gudbaya heerka u gudbaya gawaarida qashinka. [More ...]
Raaxo si ay uga careysiiso dalxiisayaasha shisheeyaha ee Bursa! Safarka wareega wareega ee Bursa Ropeway ee loogu talagalay rakaabka ajnabiga ah wuxuu ahaa 57 lira! Uludag bixitaanka shirkad shaqaale baabuur cable badan ka jeeclaadeen waa mid ka mid ah xarumaha ugu dalxiiska muhiim Turkey ee xilliga qaboobaha [More ...]
Magaalada Ankara, ee khadka tareenka ee Kizilay-Cayyolu, ayaa ardaygii jaamacadda Bilkent N., gabar yar, ay ku dhacday biraha. Waax gurmad deg deg ah ayaa loo abaabulay si loo badbaadiyo ardayga dhaawacmay. Shaqooyinka saraakiisha [More ...]
5 Xitaa Adeegga Gaadiidka Dadwaynaha ee BTU Campus
Wadada Basaska Dawlada Hoose ee Adana Magaalooyinkeeda waxaa loo dheereeyay masaafo dhan 6 kilomitir, Basaska 22 waxay sameyn doonaan safarada 102 maalin kasta. 5 ama xitaa adeegga gaadiidka dadweynaha ee ka yimaada Metropolitan illaa Adana BTU Adna Metropolitan Municipal, Xarunta Adanka Sayniska ee Degmada Sarıçam [More ...]
Duulimaadyada EGO ee laga soo bilaabo Polatlidan ilaa Ümitköy Metro ayaa bilowday
Xarunta Ankara ee Magaalada Ankara EGO Agaasime guud, Polatlı-Ümitköy Metro Station 31 Janaayo Arbacada waxay ka bilaabaneysaa adeegga baska. Subaxdii iyo fiidkii basaska dhex maraya inta u dhaxaysa Polatlı-Ümitköy Metro Station Number 528 [More ...]